A Social Media Kushambadzira Chirongwa mu6 Nyore Matanho | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 1, 2017 China, August 31, 2017 Douglas Karr
Zvemagariro midhiya zvinoramba zvichienderera mberi senge network, kuteerera, kutsikisa, kutsigira, uye kusimudzira chishandiso chemabhizinesi. Zvemagariro midhiya kushambadzira kuri kufambira mberi, ichipa dzimwe nzira uye yepamusoro tarisheni iri kudzikisira mutengo pakubatana. Iwo mapuratifomu ekuteerera, kupindura, kushambadzira, kuyera, uye kuita mushandirapamwe zvakasimbiswa uye zvinoramba zvichipa zvipo zvakakura kumabhizinesi.
Nehuwandu hwemagariro enhau mapuratifomu ave kuwanikwa, zvirinyore kuvhiringidzika kana kusava nechokwadi chekuti ungagadzirise sei nhepfenyuro yemagariro munharaunda yanhasi yehukama yakabatana. Masocial media network ndeimwe yenzira dzakanakisa kusimudzira zita rako pasirese. Nevashandisi vanopfuura mamirioni 2.7 pasi rese, panogona kuve pasina mubvunzo kuti vezvenhau vanopa mukana wakakura uye zvine chekuita nebhizinesi 'repazasi. Emedia Kugadzira
Takadzidza zvakawanda munzira yose. Kune chikamu chikuru, mabhureki ari kudzidza kuti vezvenhau inzira huru yekuvaka ruzivo uye kutyaira kubatikana; asi kwete nguva dzose iri nani yepakati yekutengesa yakananga. Isu tinoziva zvakare kuti vezvenhau veshanduko vakachinja kugutsikana kwevatengi kuenda kune yeruzhinji foramu uko kwedu vangangove vatengi vanogona kuverenga nezve zvisirizvo zvezviratidzo Iyo injini ine simba kune vese mutengi uye bhizinesi, asi inogona kunetsa uye kudhura pasina rakakura rezvenhau kushambadzira chirongwa.
Chii chinonzi Social Media Kushambadzira Chirongwa?
Kuti ugadzire mhedzisiro, iwe unoda chirongwa chezvemagariro cheshambadziro chinoenderana nezvinangwa zvebhizinesi rako. Inofanira kusanganisira chinzvimbo chako chazvino chemagariro enhau, maitiro aunopikisa uchikwikwidza, zvinangwa zvemberi, uye matanho ese nematurusi auchazoshandisa kusvika ipapo.
Iyo yezvemagariro midhiya kushambadzira chirongwa chinoshanda seyepurani yezvese zviito zvako, pamwe senzira yekuona kana kuedza kwako kuri kuwana kubata kana kwete.
Yemagariro Midhiya Kushambadzira Chirongwa Matanho
Gadzira zvinangwa zvako zvemagariro uye zvinangwa - iva nechokwadi chekuti inoenderana neyako nzira yekutengesa kuti uve nechokwadi chekuti zano rako rinotyaira mhedzisiro yemabhizimusi.
Kuitisa pasocial media audit - tora mufananidzo weauri parizvino midhiya mamiriro uye wozvienzanisa nevako vanokwikwidza.
Gadzira kana gadzirisa ako enhau midhiya profiles - neakawongorora yako yapera, inguva yekuti iwe uvandudze hushamwari hwako midhiya.
Kufuridzirwa kwehukama hwako hwemagariro - tarisa zviitiko zvezvemagariro zvevanokwikwidza uye mamwe ma profiles ane chekuita neindasitiri kuti uone kuti ungasiyanise sei kuvapo kwako.
Gadzira chirongwa chemukati uye khalendari yekunyora - kutumira uye kugovana zvirimo zvirimo nguva nenguva ndicho chinhu chakanyanya kukosha kuona budiriro mumasocial media.
Tevera, ongorora, uye gadziridza yako yemagariro midhiya kushambadzira chirongwa - kugara uchiongorora uye kuyera kwakakosha sekuva nematanho ekubatana mukushambadzira midhiya.
Tarisa uone zvese ruzivo, matipi, uye kuraira mune ino inodzidzisa infographic kubva kuEmedia Creative, Maitiro Ekumisikidza Yemagariro Midhiya Strong Iyo Inowirirana Ne Bhizinesi Zvinangwa.
Tags: zvemukati zvemukatiemedia kugadziraemediacreativesocial media odhitazvemagariro midhiya zvemukatikubatana kwenhauSocial Media Marketingsocial media marketing hurongwasocial media kushambadzira matanhosocial media chirongwasocial media profilessocial media matanhosocila media zvinangwa
Yakawanda Sei Inotsanangudza Vhidhiyo Kugadzira Mari?
Sep 13, 2017 pa 1: 45 AM
Zvikuru kwazvo Infographic .. Ndatenda !!